ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ၄၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တွင် မိတ်ဆွေများသို့ လေးစားစွာ အသိပေးခြင်း
၄၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တွင် မိတ်ဆွေများသို့ လေးစားစွာ အသိပေးခြင်း
အမိနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါက ...
- မိဘနှစ်ပါးနှင့်အတူ လအနည်းငယ် နေထိုင်အနားယူခြင်း၊
- အနားယူပြီးပါက နှစ်အတန်ကြာ ဝေးကွာနေခဲ့သော မိတ်ဆွေရင်းချာများ၊ စာပေမိတ်ဆွေများ၊
- ခရီးထွက်ခြင်းအစီအစဉ်များ ပြီးဆုံးပါက ထမင်းနှစ်နပ် ပုံမှန်စားနိုင်ရေးအတွက် ကြံဆောင်ရင်း အမိနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စိတ်တူကိုယ်တူ၊ ရင်ဘတ်တူ၊ ယုံကြည်ချက်တူ မိတ်ဆွေများ၊ ပြည်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသရွေ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
May healthy and wealthy Dr lawn.Ofcourse you need to move in Burma for pure democracy and silly constitution.
စိတ်ဖိအားများတဲ့ အလုပ်တွေမို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုလို့ သတိရှိစေချင်ပါတယ်..။
Thanks for myanmar sayar we love u
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ ဆုံတဲ့အခါခင်ဗျားဘယ်လိုပုံစံလည်းဆိုတာမြင်ချင်ပါဘိ
Comment ရေးသားပေးသူများ၊ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မှသာ ဝေဖန်ရေးသားခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ရေးသားခြင်း မရှိခဲ့၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲလိပ်ပြာသန့်ပါသည်။ လူချင်း တွေ့ဆုံသည့်အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပြုံးပြလည်း ကျနော်ကတော့ ပြုံးပြပါမည်။ JACBA ကိုလည်း Comment ရေးသားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :)
အမြင်မှန် ၊ အတွေးမှန် ပြီး အရေးမှန်ကြပါစေ ။
Good luck Dr. Swe. Time is gradually change. We are nature of human being and part of that changing circle but lion philosophy wouldn't change as long as old group of lion still healthy. Don't forget that.
One day, hopefully that day not so far we may see each other in our homeland.
Keep take care yourself becomes more healthy and be ready for next battle field.
The show is not finish yet and long way to go.
Thar Du Bar KIn Byar
Warmly welcome.Takecare your health.